कोरियामा नेपालीहरुलाई सुरुको ३ महिना बढि समस्या - रेग्मी :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
काठमाण्डौ बालाजु घर भएका शिव रेग्मी अध्ययनको शिलशिलामा दक्षिण कोरिया सन् २००० मा आउनुभएको हो । कोरियाको अध्यागमन क्षेत्र अन्तर्गत रहेर २००८ देखि हालसम्म रेग्मी कार्यरत हुनुहुन्छ । रेग्मीले कोरियाका विभिन्न सहरमा रेष्टुरेण्ट ब्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ ।
कोरियाको अध्यागमन क्षेत्र अन्तर्गत काम गर्दै आउनुभएका रेग्मीसँग कोरियामा रहेका प्रवासीहरुसँग सम्वन्धित विषयमा आधारित रहेर हेल्लो नेपाल कोरिया डटकमले गरेको कुराकानी
तपाईको काम र कर्तब्य के हो ?
कोरिया सरकारले विदेशीहरुलाई आ आफ्नो भाषामो अध्यागमन सम्वन्धी परामर्शका लागि सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । अध्यागमनले परामर्श सेवा अहिले १८ वटा भाषामा सेवा दिदै आएको छ । जहाँ नेपालीहरुका लागि १३४५ डायल गरि १३ नम्वर दवाउदा नेपाली भाषामा सेवा लिन सकिन्छ । हाललाई मैले उर्दु, अग्रेजी, कोरियन र नेपाली भाषामा सेवा दिने काम गर्दै आएको छु । यहाँ १/१ वर्षको सम्झौता अनुरुप हामीले काम गर्ने गर्दछौ ।
कोरियाले हाल परिवर्तन गरेका नियमहरु केहि छन् कि ?
नयाँ नियमहरु धेरै परिवर्तन भएको त छैन तर विदेशिहरुले ५ वर्ष वैधानिकरुपमा कोरिया बसे पछि कोरियन नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउछन् । त्यसको लागि पहिला ३ करोड वन देखाउन पर्दथ्यो भने अहिले ६ करोड देखाउन पर्ने भएको छ, यो सन् २०१६ देखि लागू हुदैछ अन्य कुरा यथावत नै छ । अनि अर्को विदेशी नागरिकसँग विवहा गरि डिभोर्स गरेका कोरियन नागरिकले अर्को विदेशीसँग विवहा गर्न ५ वर्ष सम्म पर्खनुपर्ने नियम भएको छ । त्यस्तै विदेशि विधार्थी डि २ भिषाहरुका लागि भिषा थप गर्ने अवधि १२० दिन बनाइएको छ, अन्यहरुको लागि भने यो पहिला जस्तै ६० दिन रहेको छ ।
इपिएस कामदारले आफ्नो परिवार ल्याउन के कस्तो सहज रहेको छ ? कस्तो प्रकृयाबाट परिवार ल्याउन सकिन्छ ?
इ९ भिषा बाहकहरुले डिपेन्डेन्ड भिषाका लागि निवेदन दिनै पाउदैनन त्यसैले सहजता छ भन्न त मिल्दैन । तर आफू काम गरेको कम्पनी मालिकले चाहेको खण्डमा उसको जमानीमा नेपालको कोरियन राजदुतावासमा भिषाका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर भिषाको ग्यारेन्टी भने हुदैन । यो तरिकाले नेपालीहरु आएको चाहि मलाई थाहा भएन तर पाकिस्तानीहरु चहि यसरी आएको भेटेको छु ।
कोरियामा हाल अवैधानिक नेपाली कामदारहरुको संख्यामा बृद्धि भयो भनिएको छ, कति संख्यामा अहिले नेपालीहरु अवैधानिक रहेका छन ?
त्यस्तो ठ्याक्कै यति भनेर त म भन्न सक्दिन, त्यस्तै २३ सय देखि २५ सय को हाराहारीमा अवैधानिक नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अवैधानिक कामदारका लागि अध्यागमनको कस्तो नीति रहेको छ ?
जुनसुकै देशमा पनि अवैधानिकहरुलाई उक्त देशले आफ्नो नियमानुसार कार्वाही गरेको हुन्छ । अध्यागमनले बेला बेलामा समातेर सम्वन्धित देशका नागरिकलाई फिर्ता पठाउने गर्दछ । वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्वरमा धरपकड केहि बढि हुन सक्दछ । अध्यागमनले सन् २०१५ को ७ महिनादेखि स्वइच्छाले स्वदेश फर्कने नागरिकलाई सोहि पासपोर्टमा पुन कोरिया प्रवेश गर्न सक्ने अवसर दिएको छ । तथापी उनिहरुको कोरिया अवैधानिक बसाईको आधारमा पुन प्रवेशका लागि समयावधि भने फरक फरक हुन्छ । अवैधानिक नागरिकहरु स्वदेश फर्किदा अझै भनौ हाम्रै नेपालीहरु घर जादा पेनाल्टी तिनुपर्ने, अध्यागमनमा गएर खवर गर्नुपर्ने भन्ने केहि पनि हुदैन सिधै टिकट लिएर टिकट समय भन्दा ३ घण्टा अगाडी तेश्रो तल्लामा रहेको जी काउन्टर पछाडी अध्यागमनको कार्यलय रहेको हुन्छ । त्यहा गएर म जादैछु भनेर खवर गर्दा हुन्छ अरु त्यस्तो कुनै झन्झण्ट बेहोर्नु पर्दैन ।
कोरियामा अध्यागमन क्षेत्रका नियमहरु परिवर्तन भइरहन्छ, परिवर्तन नियम थाहा नपाउदा सम्वन्धित ब्यक्तिहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् । परिवर्तन भएका नियमहरु थाहा पाउन के गर्ने ?
हो समस्या पर्ने गर्छन म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु हामीले नयाँ पासपोर्ट बनाएपछि १४ दिनभित्र अध्यागमनमा जानकारी दिनुपर्छ नत्र जरिवानामा परिन्छ । त्यहि हो सवै भन्दा सजिलो १३४५ डायल गरि १३ थिचेपछि नेपाली भाषामा जानकारी लिन सकिन्छ । कोरिया अध्यागमनको वेभसाइटबाट पनि जानकारीहरु थाहा पाउन सकिन्छ ।
कोरियामा नेपालीहरुको कस्ता समस्याहरु देख्नुभएको छ ?
कोरियामा नेपालीहरुको समस्या छ, दक्षिण कोरियामा नेपालीहरु प्रवेश गरेको सुरुको ३ महिनासम्म बढि समस्या हुने गरेको देखिएको छ । खानपान, भाषा, संस्कृति तथा सोच भन्दा भिन्न काम लागायत विभिन्न कारणले उनिहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन । त्यस्तै साहूको हेल्चेक्रराई र सम्वन्धि ब्यक्तिले भाषा नजन्दा अवैधानिक हुनपर्ने, अरुको देखासिकीमा मानसिक तनाव देखि अत्महत्या गर्ने सम्मको विकराल समस्याहरु देखेको छु ।
समस्या समाधानका लागि तपाईको केहि सुझाव छ कि ?
विशेषत अहिले मानसिक तनावमा नेपाली हरु धेरै देखिएका छन् । जहाँ उनिहरुलाई आवश्यक सल्लाह र परामर्श नहुदा नराम्रा घटना घटिरहेका छन् । सउल स्थित नेपाली दुतावासले कोरिया भित्रिएको २ महिना अथवा ३ महिना पछि एउटा समय राखेर सुरुमा कोरिया प्रवेश गर्दा लिइने ३ दिने तालिम जस्तै गरि उनिहरुको समस्या सुन्ने र आवश्यक परामर्श दिने खालको २ दिन बरु शनिवार र आइतवार गर्ने हो भने पनि कामदारका समस्याहरु घटाउन प्रभावकारी हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति : २०७२ पौष १७ (January 01, 2016)